'Mas Halis Ah Oo Nin Macallin Ah Koofiyaddiisa Ku Jiray Intii Uu Safrayay 11 kiiloo mitir' - Borama News Network %
‘Mas Halis Ah Oo Nin Macallin Ah Koofiyaddiisa Ku Jiray Intii Uu Safrayay 11 kiiloo mitir’
Nin u dhashay waddanka Hindiya ayaa sheegay inuu si dirqi ah geeri uga badbaaday kaddib markii uu mooto u safrayay muddo 11 kiiloo mitir ah, isagoo koofiyaddii madaxa uu ku watay uu ugu dhex jiray Mas aad u halis badan.
K A Ranjith, oo ah macallin ka howlgala gobolka Kerala ee koonfurta Hindiya ayaa sheegay inuu koofiyaddiisa iska bixiyay kaddib markii uu dhammeystay safarkiisii maalinlaha ahaa, markaasoo uu arkay maska ay suntiisa haliska tahay oo ku laalaaban gudaha koofiyadda, oo ah kuwa amaan ahaanta loo xirto marka mootooyinka la kaxeynayo.
Laakiin nasiib wanaag, maska ayaa markaas ahaa mid aan nooleyn, waxaana la sheegay inuu ku bakhtiyay cadaadiska koofiyadda iyo madaxa macallinka oo isu qabtay.
Ninkan ayaa islamarkiiba loola cararay isbitaalka ugu dhawaa, halkaasoo ay dhakhaatiirta ugu sheegeen inuusan maska wax qaniinyo ah u geysanin.
Mr Ranjith ayaa islamarkiiba dab qabadsiiyay koofiyaddiisii, isagoo soo iibsaday mid cusub.
Dabayaaqadii bishii March ee sanadkii hore, nin u dhashay islawaddankaasi Hindiya ayaa aad u argaxay kaddib markii uu la kulmay dhacdo tanoo kale ah, sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaas.
Bibhuti Bhusan Sahu, oo daggan meel u dhow magaalada Bhubaneswar ee bariga Hindiya ayaa koofiyaddii uu mootaka ku wadan jiray xirtay isagoo uu mas ugu jiray, xilli uu biyo soo dhaansanayay.
Ma jirin wax dhibaato ah oo ninkaas qudhiisa kasoo gaartay maska ugu dhuuntay koofiyadda.’Mas halis ah ayaa nin macallin ah koofiyaddiisa ku jiray intii uu safrayay 11 kiiloo mitir’
Maayirka Magaalad Berbera Oo Dhagax Dhigay Dugsi Waxbarasho Oo Laga Hirgalinayo Deegaank Geeri Ee Gobolka Saaxil
“Waxaan Ka Shaqeysan La’ Ahay Madaxweyne Donald Trump” Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Dalka Maraykanka
Hadaladii ugu Saameynta Badnaa 2019 Baraha Bulshada Soomaalida ( Warbixin )
Mustafehaji January 4, 2020 January 4, 2020
Wasiirka Xidhiidhka Golayaasha Iyo Arimaha Dastuurka Somaliland Oo Tobabar U Soo Xidhay Dhalinyaro La Barayay Dastuurka Somaliland
Bnnstaff Bnnstaff February 9, 2020
Khilaafka Wabiga Nile Ee Dhexeeya Dowladaha Itoobiya Iyo Masar Oo Sii Xoogaysay
Ugaas Cabdirashiid Ugaas Doodi Oo Maanta Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Magaalda Jigjiga
Bnnstaff Bnnstaff February 29, 2020
Xukuumada Muuse Biixi Oo Markii Ugu Horaysay Shaacisay In Ay Talaalayso Xoolaha
Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Somaliland Oo Sheegay In Somaliland Wax Ka Sii Dhaca...